Masar: Hooyadii adduunkaay! | isbeddel
← Xusni barrax…Misr xurra
Hoggamiyeyaasha reer galbeed halkee qarisa?! →
Masar: Hooyadii adduunkaay!
Axmed Ismaaciil “Axmed-deeq”
kuguma dhalan, kuumana dhalan. Haddana dharaartii aynu kulannay baad dhinbiil caashaq wadnahayga ku beertay. In badan ayaan afkayga ka dhawray ku dhawaaqa kalgacalka aan kuu qabo. Maantase waxaan kuu cadaynayaa in jacaylkaagu jidhkayga bariinsaday. Kalgacalka igu tallaalmay ee aan kuu qabaa wuxuu gaadhay heer aan boggayga iyo beerkayga dhexdooda kaaga bineeyo beer aad ku raaxaysato. Xidhiidhkaa dahsoon ee dareenadeena hoose isku hayaa haddii uusan jirin, erayadani kama soo burqadeen halbawlaha jidhkayga, Kuuma warwareen, kaamana walaaceen.
Soddon gu’ oo aad duq hoos galgalanaysay waxay yididiilo tireen gurboodkaaga gaashaan qaadka ah. Waxaad wayday haybaddii aad adduunka ku lahayd. Waxa hagaasay hormoodnimadii ay Afrika iyo Carabiba kugu majeeran jireen. Heeryada ku saarnayd sida aad u qabatintay iyo nuux nuuxsi la’aantaada waxaan moodi jiray inaad doqon tahay. Haddase waxan ogaadey inaad samirkii Ayuub lahayd. Oo maxaan u ogaan waayay miyaadan hal hays ka dhigan tuducan gabayga ah “Sabra oo sabra, illaa uu sabirku ka caajiso sabirkayga”. Miyaanu sabirka laftiisu maanta ka caajisnayn sabirkaaga? Oo tolow haddii aannu Soomaali nahay ma kula mid baannu nahay oo waxa iman doonta maalin uu sabirku ka caajiso sabirkayaga?
Anniga oo oofinaya ballankii aynu galnay berigii ay gacantaydu naaskaaga sida ku talo gal la’aanta ah u taabatay ee ahaa is barbartaaga maalinba midkeennii tabaalaysan waxaan erayo kooban ku cabirayaa duruufaha qalafsan ee aad dhex jibaaxayso. Ma arag maanta maalin aad ka il xun tahay; mana arag maanta maalin aad ka wanaagsan tahay; ma arag maanta maalin aad ka sharaf badan tahay; mana arag maanta maalin aad ka shaqo yar tahay; ma arag maanta maalin aad ka baraarugsan tahay; mana arag maanta maalin aad ka baylahsan tahay; ma arag maanta maalin aad ka itaal badan tahay; mana arag maanta maalin aad ka taag daran tahay. Marxaladahaa isku lidka ahi maankayga waxay ku rideen xaalad aan illaa hadda u magac la ahay. Heer cabirka dareenkaygu marar hawada sare ayuu ku laalmayaa, mararna haadaamo hoose ayuu ku dhacayaa. Marar farxad iyo rayn rayn ayaa tin iyo cidhib sidaa ii saaqaya; mararna murugo iyo muusanaw ayaa kab iyo kal sidaa ii buux dhaafinaya.
Waxaan la dhaygagsanahay dhiiranaanta dhallinta dhulkaaga. Waxaan la dhacsanahay dhawaqa xornimo doon ee ay sida quruxda iyo qunuudda leh ugu luuqaynayaan. Waxan la yaabanahay sida aad ugu laqintay damqashada iyo diirnaxa ay u hayaan dalkooda iyo dadkooda. Waayo aqoonta ay qaadanayeen ma ahayn mid loogu talo galay baraarugga bulshada. Ma ahayn mid han iyo hiigsi ku abuuraysay. Ma ahayn mid kacdoon iyo karaamo ilaashi ku dhiiri galinaysay. Waxaan ku faraxsanahay sida ay sumcaddaadii saban xumaadku ku dhacay naftooda ugu sadqeeyeen iyaga oo ku celcelinaya “Geeridu mar bay nolosha dhaantaa, Dhaqashiyo mar bay kaa yihiin dheragu xaaraan”. Calankaaga meel walba ka babanayaa wuxuu beeraq ku ridayaa naftayda. Heesaha dareen taabadka leh ee meel walba ka dananayaa waxay weedhaaminayaan laabtayda waxaanay igu soo kicinayaan ladh. Xaalladan ba’an ee aad ku jirtaa inta ay baqasho igu abuurayso in ka badan waxay igu kordhinaysaa kalgacalkii aan kuu qabay. Waxaanay daaha ka rogaysaa asalnimadii, dadnimadii iyo dunji wanaagii dadkaaga, halka ay isla jeerkaas hadhuudhlaha ku darayso sheekadii nagu dhex wareegi jirtay ee ahayd “Masaaridu haddii ay maamul waayaan waxay noqoyaan bahalo is cuna, dadkana cuna”.
Maalintii Alle keenaba waxa i soo maraya intaasoo dhacdo oo mid waliba wax ka odhaansho mudan tahay. Waanan ka odhan doonaa haddii cimri igu simo. Dhalinyaradaada dhiiggooda iyo dheecaankooda u huraya xornimada, cadaaladda iyo sinnaanta waxaan leeyahay: Magaciin ha jiro, illaaliya midnimadiina; xaqiijiya himiladiina oo hinjiya horumarkiina. Haddii aanu jidhkaygu idinla joogin qalbigaygu mar walba waa idinla jiraa. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay maxaa ku jaban haddii aynu ka dhinbiil qaadano dhiggeena Masar.
Ugu danbayn Masareey waxaan ku arkayaa adiga oo aan iska war hayn oo tubtii ay Soomaaliya adhaxda kaga jabtay haya. Waxaan arkayaa xaaladdaada oo maalinba maalinta ka danbaysa jiq sii galaysa. Waxaan arkayaa kacdoonkaaga oo sii balaadhanaya. Duqa aad rubuc qarniga inta ka badan wada joogteen waxaan leeyahay ha qaadin dariiqii Siyaad Bare ee qaad dawgii uu Daahir Riyaale maray. Haddii aad Masar u soo halgantay adiga oo dhalinyar ah, maanta ha halaagin adiga oo waayeel ah. Masareey, hooyaddii adduunkaay; abaalka aad igu leedahay ma oofin karo waxaanse hadalkaygan ku soo xidhayaa.
Ninkii ballankaaga qaaday,
Huwadaday bulbushii libaaxa,
Kub iyo bawduu ka jabi.